အစဉ်အရမ်းမိတဲ့ ရှင်ဂွမ်းဂွိ: ဘယ်သူ့ အတွက်လဲ..
အလုပ်တွေများနေတာနဲ့ ရေးချင်တာတွေ ကို မရေးဖြစ်ဖူး၊ အခု အချိန်လေးနဲနဲ ခိုးပြီး အတွေ့အကြုံလေး တစ်ခု ဖောက်သည်ချ ချင်လို့ ပါ..
ရှင်ဂွိ က မအားလွန်းလို့ သာ ရှောင်နေရတယ်၊ ပွဲဆိုရင် သိပ်ကြိုက်၊ ငယ်ငယ် ကဆို ရွှေတိဂုံ တပေါင်းပွဲ၊ ကျိုက္ကဆံ ကွင်း မှာလုပ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ ပွဲတွေ ဆို မလွတ်တမ်းပဲ။ အတန်းတင် စာမေးပွဲကြီး ဘယ်လောက်နီးနီး နေ့တိုင်းလိုလို ပွဲခင်းထဲမှာပဲ။ တစ်နေ့ဖုံမှုန့် မရှူရရင် ကို စားမ၀င်၊ အိပ်မပျော်... နောက်ပြီး ဇာတ်ပွဲတွေကို နောက်ဖေးပေါက်က တောင် ၀င်ကြည့်ဖူးတယ်။ မြို့ တော် သိန်းအောင် ဇာတ်အဖွဲ့ က ရှင်ဂွိတို့ မိသားစုနဲ့ခင်တော့ အလကားဝင်ကြည့်လို့ ရတယ်၊ အဲသလို ရှင်ဂွိ တို့ပွဲကြိုက်ပုံက..
ဖြစ်ပုံက ဒီလို….ရှင်ဂွိ ရဲ့ အလုပ်ထဲကသူ တွေ လှူပ်လှူပ်ရွရွ ဖြစ်နေတော့ ….ဟဲ့ဟဲ့ ဘာတုန်းလဲဟဲ့ ဆိုတော့ ရှင်ဂွိတို့ ဆီ လူသတင်း လူချင်းဆောင်ပြီး သတင်းက ပြန့် လာတာကိုး… သီးလေးသီး (ဆေးရောင်စုံ) အငြိမ့်အဖွဲ့ လာမယ် ဆိုပါလား… ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့အတွက်တဲ့၊ ရတဲ့ပိုက်ဆံ နာဂစ်ကိုလှူမယ်တဲ့၊ အော် လူ့ အခွင့်အရေးဆုရလိုက်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်း တစ်ခုက ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး က ဦးဆောင်လုပ်ပေးမယ်တဲ့။ ပွဲ လုပ်တဲ့ နေရာက ရှင်ဂွိ နေတဲ့ နေရာနဲ့ ဆို အတော် လှမ်းတယ်၊ တော်ရုံ သွားလို့ လာလို့ လွယ်တာ မဟုတ်ဖူး၊ မသွားတော့ ဖူးလို့ ပါပဲ…. ဒါပေမဲ့ နာဂစ် အလှူဆိုတော့ အင်း သွားလိုက်ရင် ပွဲလဲကြည့်ရ ကုသိုလ်လဲ ရတာပေါ့နော်။ နောက်ပြီး အကြိုအပို့ အစီအစဉ်လဲ ရှိတယ်ဆိုတော့… အဲဒီလိုအတွေးနဲ့ ပွဲကြိုက်မယ် ရှင်ဂွိ ကို နှစ်ခါ ခေါ်စရာ မလိုဘူး…। ဗေထိ ဆို ရှင်ဂွိ တို က ဂျိ ပေါ့။ အလုပ်တွေ ဘယ်လောက်များများ ရှိတဲ့ အလုပ်တွေကို ဘေးဖယ်၊ အိုး နေခင်း အလုပ်ချိန်မှာ တိတ်တိတ်ကလေး အိမ်ပြန်ပြီး ရေမိုးချိုး၊ ခေါင်းလျှော် အလှပြင် နဲ့ အရှုပ်တွေ လုပ်ရ တော့တာပေါ့….
အဲဒီလိုနဲ့ ပဲ ရှင်ဂွိတစ်ယောက် ဘတ် ၂၀၀ တန် လက်မှတ်ကြီး ကိုင်ပြီး ပွဲခင်းထဲကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ အိုး ပွဲခင်းကြီးက လဲ ဟိန်းလို့ ပါလား။ တယ်ဟုတ်….. ရှင်ဂွိ ဒီတောကို ရောက်တာ တစ်နှစ်ကျော်နေပြီ ဘာပွဲဘာလမ်းမှလဲ မရှိဘူး၊ ဒီတခါတော့ စမတ်ကို ဂွမ်နေပါလားပေါ့။ အိုး စင်ပေါ်က စာတမ်းကြီးကို မြင်တော့ ရှင်ဂွိ က ကျေနပ်သွားတယ်။ နာဂစ်ဒုက္ခသည်တွေ ကို ကူညီ တဲ့အထဲ ရှင်ဂွိ လဲပါတယ် လို့ကြွားနိုင်ပြီပေါ့…..
ထူးဆန်းလိုက်တာ အခုတစ်လော ဒီဒေသ မှာ ဘတ်(နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်) မရှိတဲ့ သူတွေကို ရဲ ဒီလောက် အဖမ်းအဆီးလဲများနေတာ။ အခုတော့ ရဲတွေ လဲ ဘယ်ပျောက်နေပါလိမ့်… ရှင်ဂွိ လဲ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် သွားစပ်စု ရတာပေါ့။ အဲဒီတော့မှ ပဲ ရှင်ဂွိလဲ ပေါက်သွားတယ်။ အဟော်ဟော.. ဂလိုကိုး.. လိုင်းကြေး ပေးထားတာကိုး။ လိုင်းကြေးဘယ်လောက်ကျသတုန်းဆိုတော့ .. အမလေး ဘုရား၊ ဘုရား… ရဲတစ်ယောက် ၃၀၀၀ လောက်အနဲဆုံးတဲ့၊အုပ်စုတွေက နဲမှ မနဲတာ.. ၂သောင်း အောက်ထစ် သုံးသောင်းလောက် ကုန်မှာတဲ့။ ဟင် ဒါဆို နာဂစ်အတွက် ဘယ် သိပ်ကျန်တော့ ပါ့မလဲနော်…
အစတုန်းက ပွဲကို (၇) နာရီစမယ် ပြောထားတာ ကြည့်ပါဦး အခုထက်ထိကို မစနိုင်သေးဘူး။ လူတွေကလဲ ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ် ကလေးတွေကလဲ များပါဘိသနဲ့ ။ အင်း မြန်မာစံတော်ချိန် ဆိုတာ ဒါပဲ ထင်ပါရဲ့ ၊ ဒီလို နဲ့ (၈) နာရီထိုးရော..ဟော ဟော ပွဲစတော့မယ်…. အော်ပီကျယ် ကနေ အသံထွက်လာတာပြီ။ ပွဲ အစမှာ အလှူ့ ရှင် ဟုတ်ပေါင်.. အစီအစဉ် ကို ကမကထလုပ်တဲ့သူပေါ့လေ.. တက်လာမိန့် ခွန်းချွေပါတယ်၊ ပြောသွားတာ ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် လုပ်တဲ့အကြောင်း နဲနဲ အစဖွင့် ပြီးတာနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး က သူ ‘အရှုပ်သား‘ ဆိုလား.. ‘အာ ကောင်းသား‘ ဆိုလား အဲဒီဆု ရတဲ့အတွက် ကျင်းပကြောင်းကို တဖွဲ့ တနွဲ့ပြောသွားပါတယ်။ ဒီဆုကြီး ဘာကြောင့်ရလဲ ဆိုတာတော့ ရှင်ဂွိ မသိလိုက်ပါဘူး။ ဒီဆုကြီး ဘာအသုံးဝင်လဲလဲ ရှင်ဂွိ နားမလည်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေချာတာတော့ ဆုကြီးရတယ်ပေါ့နော်…। ဆုကြီးက နာမည်ပဲလား ဘာတွေ ညာတွေ ပါသေးလားလဲ ရှင်ဂွိ မသိဖူး (အားမှ သွားစပ်စု ဦးမယ်။ အခုတော့ မအားသေးလို့သိသလောက်ပဲ ဖောက်သည် ချလိုက်တာ)
ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး အမှာစကား ပြောကြားနေတဲ့အချိန်မှာ စက္ကူ ကတော့ လေးတွေ လာဝေတယ်။ စက္ကူ ကတော့ ကိုင်ပြီး ဘာလုပ်ရမလဲပေါ့… ဘေးဘီကြည့် သူများတွေက ဖယောင်းတိုင်ပါ ရလိုက်တာကိုး၊ အော်နောက်မှ မွေးနေ့ မွေးနေ့ မွေးနေ့ မှာ ဖယောင်းတိုင် မီးမှုတ်မယ်တဲ့လား။ ရှင်ဂွိတစ်ယောက် ကတော့ ဖယောင်းတိုင် မပါတဲ့ စက္ကူ ကတော့ တစ်ခုနဲ့ယောင်နန ဖြစ်နေ တာပေါ့…. ကဲကဲ.. ထကြတဲ့၊ ဖယောင်းတိုင်တွေ မီးထွန်းတယ်.. ..ဖယောင်းတိုင် မရလိုက်ပေမဲ့ ရှင်ဂွိက စက္ကူ ကတော့ ကြီးကိုင်ပြီး အားကျ မခံ မတ်တပ်ရပ်တာပေါ့။
နာဂစ်မှာ သေသွားတဲ့သူ တွေ အတွက် ဆုတောင်းမယ်၊ အချုပ်ခံနေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ဆုတောင်းမယ်တဲ့။ လူတွေ ကထတော့ ၀ိုင်းထကြပါရဲ့ ၊ ငြိမ်ကို မငြိမ်နိုင်ဘူး.. ကြွက်စီကြွက်စီနဲ့ ၊ အမလေး ..အပေါ်က အော်ပီကျယ်နဲ့ လဲ အော်နေတာပါပဲ၊ လူတွေ ငြိမ်ကြပါ.. တစ်မိနစ် ငြိမ်ပါမယ်.. တစ်မိနစ် မပြောနဲ့တစ်စက္ကန့် တောင် မငြိမ်ဘူး။ အော် …လူတွေ ..လူတွေ.. ..စကားများ… အချိန်မရွေးပြောလို့ ရတယ်။ ဒီအချိန်ကလေးတောင် မငြိမ်နိုင်ဘူးလား.. အော်အော် …အသံတော့ နဲနဲ လျော့သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားကျောင်းမှာလို လုံးဝငြိမ်သက်သွားတာ မဟုတ်သေးဘူး။ အခန်းအနားမှူးလဲ သဘောပေါက်သွားတယ်။ ဒီလူအုပ် လုံးဝငြိမ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဖူး ဆိုတာ သိသွားပါတယ်။ အဲဒီတော့ အကွဲတော့ အရှက်မခံနိုင်ဘူး.. အဲလေ အရှက်တော့ အကွဲမခံနိုင်ဘူး။ မြန်မြန်ပဲ ဆုတောင်း ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီလူတွေ ဘာတွေ ဆုတောင်းလဲတော့ မသိဘူး။ ကြွက်စီကြွက်စီ အသံက ဟိုနားကကြားရ ဒီနားက ကြားရနဲ့ ပါ။ ရှင်ဂွိ အတွေးထဲ ရုတ်တရက် ၀င်လာတာက ဒီလို ဆုတောင်းပွဲတွေ လုပ်နေတယ် ဆိုတာ ကြားရပေါင်းလဲများပြီ။ ဒီလို ပွဲလမ်းသဘင်နဲ့ဆုတောင်းမှ ဘုရားကြားမယ် ထင်လို့ လား။ နောက်ပြီး.. ဒီ လို ဆုတောင်းပွဲ မလုပ်တဲ့ အချိန် အိမ်မှာရော ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာရော ဆုတောင်းကြရဲ့ လား။ ဘုရားသခင် ကပဲ နားလေးနေတာလား.. ဆုတောင်းတဲ့ အသံက ပဲ ကျယ်လွန်း လို့ဘုရား မျက်စိနောက်သလား...မပြောတတ်ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကတော့ လွတ်သင့်တဲ့ ရက်ကို ရောက်တာတောင် မလွတ်ဘူး။ ဘုရားသခင်က နှုတ်ဆိတ်နေတဲ့ အတူတူ ဘာလို့ များ ဘုရားသခင် ကို နားညည်းအောင် လုပ်နေပါလိမ့် လို့ ပေါ့နော်။ တစ်ခု သေချာတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် လို့သာ ပြောတယ်….မွေးနေ့ ရှင်က လဲ မသိ ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်သွားမှန်းမသိတဲ့ပွဲ တစ်ခုပဲပါ.. မွေးနေ့ ရှင် အတွက် ဘာများ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်လို့ တွေးမိပါတယ်..
ဒီလိုနဲ့ရှင်ဂွိလဲ မကျေမချမ်းနဲ့ ပဲ ပွဲခင်းထဲကို လှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်တော့ ပွဲလာကြည့်တာ ကလေးတွေ အတော်များသား .. လူကြီး လဲ အတော်များတယ်။ အင်း ၀င်ကြေးတော့ အတော်ရမှာပဲပေါ့၊ ဒီလိုနဲ့ဒေါ်စပ်စု ရှင်ဂွိ ထပ် သွားပြန်စပ်စုလိုက်တယ်။ လူတွေ ဒီလောက်များတယ် လက်မှတ် ဘယ်နှစ်စောင် လောက် ရောင်းရလဲလို့ ပေါ့။ အလကားမေတ္တာလက်မှတ်နဲ့ လာတာ တ၀က်လောက်တဲ့.. (ဟွန်း ဒီလိုမှန်းသိ ရှင်ဂွိလဲ မေတ္တာလက်မှတ် ရအောင် တောင်းပါတယ်.. .. အော် နောက်မှ ပြန်စဉ်းစားတာက အလှူလေ ရှင်ဂွိရဲ့ မတွန့် တို ကောင်းဖူးဟဲ့ပေါ့ ကိုယ့်စိတ်ကို ပြန် ဆုံးမရတယ်)။ အခုပွဲ က တစ်စောင် ၂၀၀ ဆိုတော့ တစ်သောင်းခွဲလောက်ရတယ်တဲ့။ ကျန်တဲ့ ပွဲ နှစ်ပွဲမှာကတော့ မြို့ လဲသေး တော့ ၁၅၀ တန်လက်မှတ်တွေ ဆိုတော့ ပွဲသုံးပွဲပေါင်း ရင် သုံးသောင်းဖိုး လောက် ရောင်းထား ရတယ် တဲ့ (အတိအကျတော့ ပွဲတွေ အားလုံးမှသိရမှာတဲ့)။ ဟင် အဲဒါဆို ဘယ်လိုလဲ.. ရတာက သုံးသောင်း… ရဲ ကို ကျွေးလိုက်ရတာတင် နှစ်သောင်းကျော် သုံးသောင်းဖြစ်နေပြီ.. ဘာကျန်မှာတုန်း။ မနေထိုင် မထိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ရှင်ဂွိ… စပ်စုလက်စနဲ့ ပဲ ထပ်ပြီး စပ်စု လိုက်ပါသေးတယ်။ ဒီအငြိမ့်အဖွဲ့ က အလကား လာ က ပေးတာလား၊ ကားခဘယ်လောက်ကုန်လဲ၊ ဘာညာ သာရကာ နေကြာ ကွာစေ့ လေးတွေ ပေါ့… မေးပြီတော့မှ ကိုယ့်ပါးစပ်ကို ပြန်ရိုက်ချင်သွားတယ်။ အခုလို အငြိမ့်အဖွဲ့ ကို ဟိုး မြောက်အရပ်ဒေသ ကနေ ဒီကို ရောက်အောင် ဗန် ကား ငှားခေါ်လာရတာ ကားငှားခ တင်ပဲ ဒီအရောက်ကို တစ်သောင်းနှစ်ထောင်တဲ့။ လူတစ်ယောက် ကို တစ်ခန်း ဟိုတယ် ငှားပေးတာ တစ်ခန်း တစ်ည ၇၀၀ ဆိုတော့ တစ်ညတင် အခန်းခ ငါးထောင်လောက်ကျနေပြီ။ သူတို့ က ဘယ်နှစ်ည နေမှာပါလိမ့် ပွဲက ၃ ရက် ဆိုတော့ အနဲ ဆုံး ၃ ညပေါ့နော်.. စားစရိတ်နဲ့ ဘာနဲ့ဆို.. .. အားလုံးပေါင်းတော့.. ….ရှင်ဂွိ ဖာ့သာ တွက်ချက်နေတုန်း ညောင်ရမ်းဂွတို က ပြောပြတယ်… ဒီအဖွဲ့ လာတဲ့ စရိတ် ကို ၆ သောင်းလောက် အနဲ ဆုံး တွက်ထားတယ်တဲ့။ အခုလို စင်ငှားခ၊ အသံချဲ့ စက်၊ စပီကာ၊ အစရှိတဲ့ ပစ္စည်းငှားခ၊ ထိုင်း ကလေးတွေ လာကပြဖို့ ငှားတဲ့ အခ၊ နောက်ပြီး လာကြည့်တဲ့ ပရိတ်သတ်ကိုအကြိုအပို့ လုပ်ပေးဖို့ ကားခ နဲ့ ဆီဖိုး မပါသေးဖူးတဲ့။ အားလုံးပေါင်းရင်တော့ တသိန်းတော့ကျော်မှာပေါ့တဲ့။ အိုးလားလား…နဲ တဲ့ စရိတ်မှ မဟုတ်ဘဲ။ အင်းလေ…ပွဲက တဲ့သူတွေကို လဲ တန်ရာတန်ကြေးတော့ ပေးသင့်တာပေါ့ နော် နို့ မို့ ဆို သူတို့ ဘာနဲ့ထမင်းစားမလဲ.. ၀မ်းရေးကရှိသေးတယ် မဟုတ်လား။ ပြောတော့ နာဂစ် ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် ဆို .. မမြတ်တဲ့ အပြင် ရှုံးတောင် ရှုံးနေသေးတာ.. တကယ်တမ်း ကုန်မဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို နာဂစ် ဒုက္ခသည်တွေကို တိုက်ရိုက်သွားပေးတာက မှ ပိုကောင်းဦးမယ်.. ၄ ဆ ၅ ဆ လောက် ပိုက်ဆံပိုရဦးမယ်.
ရှင်ဂွိတို့ က ပျော်ပွဲသဘင် ဆင်ယင်နွှဲ နေကြတယ်.. လူတွေကလဲ မြန်မာပြည်အတွင်း မှာ ဘာဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို မေ့လျော့နေကြတယ်.. ပြက်လုံးတွေအကြား ရယ်နေကြတာ တ၀ါးဝါး တဟားဟားနဲ့ ...ပြည်သူ သန်းနဲ့ ချီပြီး နာဂစ် ဘေးကြောင့် အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ကုန်ကြတယ်.. တိုင်းပြည် ရဲ့အဓိက အသက်သွေးကြော စပါးခင်းတွေ ပါသွားတယ်.. မကြာခင်မှာ ငတ်ကြတော့မယ်.. ဒီအတွက်များ ပျော်ပွဲ ကျင်းပနေရသလား... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အချုပ်ကျနေတယ်.. ဒါကိုများ ၀မ်းသာ နေကြသလား.. အခု လို ပိုက်ဆံတွေ အကုန်ခံပြီးတော့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းတာဟာ တကယ်ရော ၀မ်းနည်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖော်ဆောင်ပါသလား.. ဘယ်လောက်များ အကျိုးသက်ရောမှု ရှိပါလိမ့်…
အိုး ဘတ် တစ်သိန်း ကလေးများ ဘာမှ မဖြစ်လောက်ပါဘူး.. ကားတစ်စီးစာတောင် မရှိဘူး လို့ပြောကောင်းပြောမှာပါ။ ဘာပဲပြောပြောပဲ.. အခုလို အချိန်မှာ ရှင်ဂွိတို့ အားလုံးချွေတာ တာ ကောင်း ပါတယ်။ အခုဆို ရှင်ဂွိ တို့ရဲ့ ရတနာမြေနေရာတွေ အားလုံးမှာ တပြိုင်နက်ထဲ ပြဿနာ ပေါ်နေတာပါ၊ ရှင်ဂွိတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့စပါးကျီကို နာဂစ် က ဖျက်ဆီးသွားတယ်။ မြန်မာ့ ပတ္တမြား ထွက်တဲ့ မိုးကုတ်မြေကို ရေလွှမ်းတယ်၊ ဟောလာပြန်ပြီ.. ..နှစ်စဉ် ကမ္ဘာ့ အရည်အသွေး အကောင်းဆုံး ကျောက်စိမ်းတွေ ထုတ်ပေးနေတဲ့ ဖားကန့် မှာ ရေကြီးတယ်။ နောင်ဘာဖြစ်မလဲ.. မသိနိုင်ဘူး အရင်တုန်း က ရွှေရောင် လွှမ်းခဲ့တဲ့ အချိန် ချမ်းသာခဲ့တဲ့အချိန်.. သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝတာတွေ တမ်းချင်းရေးနေရမဲ့ အချိန်လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကျပ်တပြား က အစ ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။ ကိုယ့် မရှိရှိတဲ့အထဲ က မျှပေးတဲ့ စေတနာမျိုး လိုအပ်ပါတယ်။ ငါ့မှာ ပိုနေလို့ ဖြုန်းတယ်.. ဘာဖြစ်လဲ ဆိုတာမျိုး ဆိုရင် တော့ အဓိပ္ပါယ် မရှိပါဘူး။ ဒုက္ခသည်တွေကို အကြောင်းပြ၊ ပြည်သူလေးစားတဲ့ နာမည်ကို အသုံးချပြီး ဒီပွဲ ဘာ လို့လုပ်ရပါလိမ့်.. တကယ်တမ်း ဒီပွဲဟာ ကြောင်နာ အဲ..ဟုတ်ပေါင် ကြော်ငြာ ၀င်တဲ့ ပွဲ တစ်ပွဲ ဆိုတာ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ လုပ်စားတယ် လို့ ပြောရင် ကြိုက်ကြမှာ မဟုတ်ပေမဲ့ .. လုပ်စားသွားတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲ ဆိုတာ သိသာလှပါတယ်။ ပွဲကို ဦးစီးဦးမ လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကို မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေး တစ်ခု ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီပွဲဟာ ဘယ်သူ့ အတွက်များပါလိမ့်.. ဘယ်သူ့အတွက်များ အကျိုးရှိပါလိမ့်.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ဘာများအကျိုးရှိပါသလဲ။ နာဂစ် ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် ဘယ်လောက် များ အကျိုးရှိပါသလဲ။ တစ်စုံတစ်ယောက်သော သူအတွက်တော့ အကျိုးရှိသွားတာ သေချာပါတယ်.. ပွဲကို စီစဉ်တဲ့အတွက် နာမည် ပိုကြီးသထက် ကြီးသွားပါတယ်။ ကိုယ် ဆု ရတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာလို့လုပ်တာ အပြစ် မပြောချင်ပါဘူး .... ဒါပေမဲ့ တခြား အကြောင်းအရာတွေ ကို ခုတုံးလုပ်တာ တော့ မသင့်တော်လှဘူး လို့ထင်ပါတယ်…ဒါကတော့ ရှင်ဂွိ (ပြည်သူထဲက ပြည်သူတစ်ယောက်) ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အတွေးစလေး တစ်ခုပါ…
Posted by ရှင်ဂွမ်းဂွိ at 10:47 AM
သေသေချာချာ လာဖတ်သွားပါတယ် ခင်ဗျာ ... ဘယ်သူ့ အတွက် ဆိုတာ ... :(